Madheshvani : The voice of Madhesh - हङकङ आन्दोलनको चीनमाथि प्रभाव
तैपनि राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गले व्यांग्यात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन् कि राष्ट्रविरोधी तत्वहरूलाई समाप्त पारिने छ, यो स्पष्ट सन्देश, उनले डिसेम्बर, २०१९ मा हङ्गकङ्गमा विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूलाई प्रथम पटक सार्वजनिक गरेका थिए । हङ्गकङ्गमा त्यस्ता आन्दोलनहरूका अनेकौं प्रभाव देखिएका छन् तर त्यसभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण कुरो त्यस विकासक्रमको प्रभाव चीनमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा समेत परेको देखिएको छ ।
हङ्गकङ्गमा सञ्चालित आन्दोलनको गति र अवधिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी तथा सरकारमाथि स्पष्ट प्रभाव परेको देखिएको छ । चिनियाँ सरकारले हङ्गकङ्गको त्यस आन्दोलनले त्यहाँको एकात्मक प्रकृति विशिष्ट कानूनलाई अवरोधित अनुमान समेत गरेको थिएन ।
अझ उल्लेखनीय कुरो के भने, आन्दोलनका क्रममा हङ्गकङ्गका जनताद्वारा व्यक्त गरिएका भावनाहरू आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको संरक्षणले चिनियाँहरू आश्चर्यित हुन पुगेका थिए । सन् १९९७ मा चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले हङ्गकङ्गलाई आफ्नो अधिनस्थ बनाउँदा यो ठानेका थिए कि हङ्गकङ्गका जनतालाई “एक देश, दुई प्रणाली” अनुरूप प्रयोग गर्नेछन् र “एक देश, एक प्रणाली” अनुरूप अघि बढ्ने छन् तर जुन, २०१९ मा हङ्गकङ्गका जनताहरू ठूलो संख्यामा गल्तीहरूमा आन्दोलनमा ओर्लिए पछि त्यो चीनको सोच विपरीत स्पष्ट सावित हुन गयो ।
यसका अतिरिक्त चीनको मुख्यभूमि सहयोगी नभएको कारण हङ्गकङ्गका उग्रवादी आन्दोलनकारी समूह विदेशी निकायहरूको उत्प्रेरणातिर अघि बढे । यो पनि उल्लेखनीय छ कि चीनको कम्युनिष्ट पार्टीका १९ केन्द्रीय समितिको अवधारणा र वेइजिङ्गमा ३१ अक्टोबर, २०१९ मा भएको चौथो साधारण सत्रले “एक देश, दुई प्रणाली” को सिद्धान्तलाई खारेज गर्दै हङ्गकङ्ग र मकाओमा स्थायी समृद्धि र स्थायीत्वका लागि चीनले आफ्नो शान्तिपूर्ण पुनरनवीकरणलाई सम्बद्र्धन गर्ने सुझाव दियो ।
हङ्गकङ्ग र मकाओ आधारभूत कानून समितिका एक वरिष्ठ पदाधिकारी शेन चुनयाओ चौथो सत्र पश्चात् आयोजित प्रेस सम्मेलनका वक्ताहरूमध्ये एक मुख्य वक्ता रहेका थिए । उनले यो पनि बताएका थिए कि चीन हङ्गकङ्गको नेताका ठाउँमा अर्कोलाई पुनस्र्थापित गर्ने सोच लिएका थिए ।
बी.बी.सी. विश्वले प्रेस कन्फेरेन्स शेनका भनाई उल्लेख गर्दै भनेका थिए कि वास्तवमा सत्रको क्रममा विरोध वा आन्दोलनका बारेमा छलफल भएको थियो र त्यसका साथै अन्य नेताहरूले समेत “हङ्गकङ्गका मुख्य कार्यकारी तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारीहरूलाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्त गर्नका निमित्त केन्द्रीय सरकारको संरचनामा सुधार” गर्ने बारे समेत सम्झाएका थिए ।
यसले चीनको सन्दर्भ र प्रभावकारिता सम्बन्ध थुप्रै उल्लेख गरेको छ भन्दै चीनमा १९९७ मा लागू गरिएको आधारभूत कानून तथा शासकीय प्रणाली समेतका बारे समेत स्पष्ट पारेका थिए ।
अर्को प्रसंग, चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई आन्दोलनकारीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । त्यसको फलस्वरूप आधारभूत कानूनका सीमाहरूलाई हटाउन बेवास्ता गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । जसलाई चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले हङ्गकङ्गमाथि शासन गर्ने र आन्दोलनकारीहरूलाई त्रसित पार्ने उद्देश्यले राखेको थियो ।
पार्टी नेतृत्वद्वारा गरिएको थुप्रै वक्तव्यहरूको अध्ययनले यो देखाएको छ कि विखण्डनप्रति विस्तारै जानु रहेको छ भने नीतिलाई पर्खेर हेर्नु आवश्यक रहेको छ । यसका साथै हङ्गकङ्गमा हुने महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूलाई समाधान गर्नेप्रति चीनको नेतृत्वले सक्रिय दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । सिन्चियाङ्गको प्रमुख असन्तोष र तिब्बतले भोग्दै आएको धन्य सेनाको प्रयोग समेतको सम्बन्धमा चीनले सोच्नु परेको छ ।
आन्तरिक रूपले आन्दोलनहरूले चीनको वित्तीय राजधानी हङ्गकङ्गलाई क्षति पु¥याएको छ, जो चीनको शीर्ष वा ठूलो बाजारहरूमध्येको एक महत्वपूर्ण बाजार रहेको छ – उदाहरणका लागि आई.पी.ओ. लाई सञ्चालन गर्ने अलीबाबा ! त्यो विश्वको शीर्ष अवैधानिक युआन फछ्र्यौट गर्ने केन्द्र समेत रहेको छ ।
जहिलेदेखि विरोध शुुरू भएको छ, पर्यटन प्राय ः आधी भै सकेको छ भने खुद्रा विक्री झण्डैले एक चौथाई तल झरी सकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकाय तथा रियल स्टेट तत्कालका लागि हङ्गकङ्गमा अप्रभावित रहेको भए पनि एक दशकमा पहिलो पटक अन्तिम चौथाईको अवधिमा खस्किंदो हुन पुगेको थियो । यी सबै पीर मान्ने लक्षण हुन् । अहिले चीनको अर्थव्यवस्था खस्किंदो हुन पुगेको छ र त्यो पूर्ण तब मान्न सकिनेछ जब हङ्गकङ्गमा सबै ठीक हुनेछ ।
बाह्य रूपले हेर्दा आन्दोलन र विरोधले अमेरिकासँगको सम्बन्धमाथि प्रभाव पार्ने गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल अमेरिकाले हङ्गकङ्गमा विरोध गर्नेहरूलाई सघाउने गरी नोभेम्बर, २०१९ को अन्तमा दुईवटा कानूनी विद्येयक माथि हस्ताक्षर गरेको थियो ।
अमेरिकी कांँग्रेसद्वारा ४१७ मतले पारित गरिएको “हङ्गकङ्ग ह्यूमन राइट्स एण्ड डेमोक्रेसी एक्ट यू.एस.स्टेट. विभागबाट प्रमाणित हुन जरूरी छ, त्यसो भएपछि मात्र त्यसले प्रमाणित गर्ने छ कि हङ्गकङ्ग पूर्णरूपले विशेष अमेरिकी व्यापार क्षेत्रमा स्वायतत्ता प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तो भएमा त्यो क्षेत्र चीनको मातहतको विषयवस्तु अन्तर्गत रहन जाने छैन ।
त्यस विद्येयकले हङ्गकङ्गमा मानव अधिकारको दुरपयोग गर्ने मानिसको हकमा समेत प्रभावकारी आधार पनि तय गर्ने छ । अर्को विद्येयकले हङ्गकङ्ग प्रहरीलाई अश्रुगैस एवं रवर बुलेटहरू बिक्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने छ । हङ्गकङ्गको विशेष स्तर गुम्नु अर्थव्यवस्थामाथि ठूलो प्रहार हुनेछ, जो वत्र्तमान अवस्थामा पूर्णरूपले खस्किँदो जालोमा फस्न गएको छ ।
हङ्गकङ्ग आन्दोलनको अर्को प्रभाव विश्वभरीका नगर तथा महाविद्यालयहरूमाथि विस्तारिता भएर जानेछ । यस्ता आन्दोलन र विरोधहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरूलाई समेत चुनौतीपूर्ण बन्न जानुका साथै विदेशी सरकारहरूको सहयोगले विपरीत विचारधाराका राजनीतिज्ञहरूलाई आकर्षित गर्नेछ ।
यस चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोणको तथ्य यो पनि छ कि चीनले त्यस्तो हरेक चालाकी प्रयोग गरेको छ जसले उसको मित्र देशहरू र त्यसको संस्थाहरूलाई उभ्याउने छ जो हङ्गकङ्ग आन्दोलन पक्षमा रहेको छ । यो सफल्ताको मापन भए पनि ठूलो मुद्दा रहि नै रह्नेछ । चीनले स्पष्ट रूपमा चुनौती आफ मालेको छ किनकि हङ्गकङ्ग आन्दोलन रातभरीमा समाप्त हुने छैन ।
यस अनुभवबाट यो स्पष्ट छ कि जबसम्म चीन कम्युनिष्ट पार्टीले हङ्गकङ्गलाई कसरी राम्रो बनाउने मानसिकता बनाउँदैन, समस्याको समाधान हुँदैन । त्यस भन्दा पनि बढी के भने लोकतन्त्रवादी उम्मेदवारहरू हालको विद्यायिक निर्वाचनमा व्यापक रूपमा जीत्दैछन त्यसैले स्थितिलाई समाधान गर्नु ज्यादै कठिन हुन जानेछ । नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्नु भन्दा अघि नै त्यो चीनका लागि वास्तविक चुनौती हुनेछ ।